विदेशबाटै अनलाइन मार्फत पुन: श्रम स्वीकृति कसरी गर्ने ? (भिडियो) | Public 24Khabar
Home News विदेशबाटै अनलाइन मार्फत पुन: श्रम स्वीकृति कसरी गर्ने ? (भिडियो)
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले श्रम स्वीकृति नवीकरण अनलाइनबाटै गराउन सक्ने भएका छन् ।
बैदेशिक रोजगार बिभागले यो सुविधा दिएसँगै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले विश्वभरबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सक्नेछन । यस अघि श्रम स्वीकृति लिन स्वदेश आउनैपर्ने बाध्यता थियो ।
अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने भएपछि अब दैनिक ५ सय जनाले वैधानिकीकरण पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार बिभागले गत साता देखी यो प्रणाली सुरु गरिसकेको छ ।
यी छ कागजात आवश्यक:-
पुन: स्वीकृतिको लागि कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम पनि अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको वैदेशिक रोजगार बिभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार बिदामा नेपाल आएका श्रमिक पनि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रदेश र केन्द्रमा तोकिएको कार्यालयमा धाइराख्नु पर्दैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा पुनः श्रम स्वीकृति लिन म्यानपावर कम्पनीको सहयोग आवश्यक पर्दैन । एक पटक श्रम स्वीकृति लिएपछि दुई वर्षसम्म त्यसको म्याद हुन्छ ।
विदेशबाटै अनलाइन मार्फत पुन: श्रम-स्वीकृति गर्ने सम्पूर्ण तरिका, प्रकृया र समाधान भिडियोमा हेर्नुहोस…
मानिस आफूलाई होइन, अरूलाई चिन्न अभ्यस्त छ। त्यसैले हरसमय अरूसँग आफूलाई तुलना गर्छ; प्रतिस्पर्धी बनेर जुध्छ; दुस्मनी साँधेर पीडा र अशान्तमा छट्पटिन्छ र सुख र आनन्दबाट आफैं टाढा भाग्छ। उसले अपनाएका यी र यस्तै शैलीबाट आफ्नो स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सम्बन्ध र संसार गुमाउँदै जान्छ। उसको भ्रम उसैले त तोड्न सक्दैन नै; अरूले भनेका सही कुरा पनि पत्याउँदैन र पछि परिरहन्छ।
जब ठेस लाग्छ तब मात्र चेत्छ तर चेत आउँदासम्म समयले नेटो काटिसक्छ। धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ। ऊ सम्हाल्न थाल्छ; बिग्रिएकोलाई बनाउन थाल्छ र टुटेकोलाई जोड्न थाल्छ तर उसलाई सबै कुराले बिदा दिने बेला आइसकेको हुन्छ। यतिबेला एउटा उखान सान्दर्भिक हुन्छ– मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो।
Previous articleलौ आयो राजेश हमाल र भाइरल सचिन परियारको पहिलो गीत , सचिनले राजेश हमालकै डाइलक बोल्दै सबैलाइ हसाए
Next articleमलेसियाले पाकिस्तानी विमान क’ब्जा लिएपछि हं’गामा, चालक दलका १८ सदस्य मलेसियामै रोकिए